WARARKA BARAAWEPOST Isniin 10 oktober 2011
Magaalada Gothenburg Oo Looga Baroordiiqay Ardaydii Lagu Qarxiyay Magaalada Muqdisho .
Kulan si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna loogu baroordiiqayay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu laayay arday iyo dadweyne kale oo aan waxba galabsan ayaa lagu qabtay magaalada Gothenburg.
Kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyadda Puntland Community Organisation ee magaalada Gothenburg iyo ururka isbaheysiga ummada soomaaliyeed (Somaliska Riksf�rbundet) ayaa lagu qabtay halka loo yaqaan Kortedala Forum, kulankan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa muujinayay dareenkooda ku aadan dhacdadii ka dhacaday xaruntii hore ee wakaaladda Hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ilaa 74 arday iyo dadwayne kale isugu jiray.
Dadweynihii kulanka ka soo qayb galay ayaa ahaa kuwa qiiraysan isla markaasna aad uga tiiraanyaysan dhibkii baaxadda weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 04-10-2011.
Ugu horeyntii waxaa aayada Qur�aan ah ku furay Sh. Cismaan Jano.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhoweeyey qaban qaabiyayaashii kulankan oo ahaa Gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Community Organisation Mudane Cabdullahi Jawhar,C/qaadir Sheekhunaa iyo Ibrahim Qalinle oo labadaba ka tirsan ururka isbahaysiga soomaaliyeed �Somaliska Riksf�rbundet i Sverige�, waxayna si faahfaahsan uga warbixiyeen ujeedka kulanka.
Sh. Cabdirashiid iyo Sh.Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Gothenburg ayaa hadallo Tacsi iyo Diini ah goobta ka jeediyay.
Waxaa Sidoo Kale khadka talefoonka kaga qayb qaatay madax ka tirsan dawlada ku meelgaarka sida gudoomiyaha gobalka banaadir Mr Tarsan iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya general Shariif Maye oo Si weyn uga warbixiyay Qaraxa Iyo dhibaatadii uu gaystay
Waxaa kaloo Codbaahiyaha lagu soo dhoweeyay abwaan Hurfe Cali Qaylo oo hadallo qiima badan iyo weliba gabay aad u wanaagsan ka jeediyay goobta.
Dadkii kale ee goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa,Sacdiya Soomaali, Anfac, Ruqiyo Tukade iyo Caasho, khadro calasoow iyo deeqa oo ku hadlay magaca gabdhaha soomaaliyeed ayaa soo jeediyay in wax loo gargaaro dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxaas.
Cabdullahi Sh Xuseen Hanti-Wadaag oo ah qore weyn oo soomaliyeed ee deggan magaalada Gothenburg ayaa isagana ka hadlay dhibkii loo geystay ardaydaa, tacsina u direy eheladdii ay ka geeriyoodeen ardaydaa. Dr Cabdirisaaq Garweyne oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo hadalo qiiro iyo qiima badan goobtaa ka soo jeediyey. Dadkii kale ee halkaa ka hadlay waxa ka mid ahaa oday Cosoble,Negeeye,Macalin Ismaaciil, Dr.Cabdicasiis Xuseen Xirsi (Benederi) .
Kulanka waxa uu ku soo gabagaboobay jawi wanaagsan.
Ojalan M Jurile Gothenburg Sweden
Halkaan Ka Qaado Sawirada